janvier 2021 – filazantsaramada
Jehovah Andriamanitra miantso olona ho mpiara-miasa Aminy
Perikopa: (Matio 25:14-30) «Fa izay rehetra manana dia homena, ka hanam-be izy; fa izay tsy manana kosa, na dia izay ananany aza dia halaina aminy. » (Matio 25:29) Nisy fanoharana nataon’i Jesosy. Lehilahy miantso ny mpanompony, dia nanolotra azy ny fananany. Samy manana ny toetrany ny olona antsoina. Misy ny mahatoky raha nomena andraikitra. Mahazo …
Continuer la lecture « Jehovah Andriamanitra miantso olona ho mpiara-miasa Aminy »
Publié parfilazantsaramada janvier 29, 2021 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Jehovah Andriamanitra miantso olona ho mpiara-miasa Aminy
NY ANTSO HO AN’I ZAKAIOSY
Perikopa(Lioka 19:1-10) «Ary rehefa tonga teo Jesosy, dia niandrandra ka nanao taminy hoe: Ry Zakaiosy, midina faingana; fa tsy maintsy mitoetra ao an-tranonao Aho anio…Fa efa tonga ny Zanak’olona hitady sy hamonjy ny very.» (Lioka19:5,10) Betsaka ny mamatotra an’i Zakaiosy satria lehiben’ny mpamory hetra izy no sady nanan-karena. Naniry hahita an’i Jesosy anefa izy. Tsy …
Continuer la lecture « NY ANTSO HO AN’I ZAKAIOSY »
Publié parfilazantsaramada janvier 15, 2021 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur NY ANTSO HO AN’I ZAKAIOSY
JESOSY SY NY ANKOHONANA KRISTIANA
Perikopa/ Marka 10:13-16 «Ary nisy nitondra zazakely ho eo aminy mba hametrahany tànana; fa ny mpianany niteny mafy ireny. Nefa tezitra Jesosy, raha nahita izany, ka hoy Izy taminy: Avelao ny zaza hanatona Ahy, ary aza rarana; fa an’ny toa azy ny fanjakan’Andriamanitra. Lazaiko aminareo marina tokoa: Na zovy na zovy no tsy handray ny …
Continuer la lecture « JESOSY SY NY ANKOHONANA KRISTIANA »
Publié parfilazantsaramada janvier 8, 2021 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur JESOSY SY NY ANKOHONANA KRISTIANA